ကိုယ်ပိုင် Keychain ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်စက်ရုံ - ZHAOQING CITY YUYA METAL PLASTIC PRODUCTS CO ။ , LTD
နေအိမ် > > သော့ကွင်း > စိတ်ကြိုက် Keychain
သင်၏စိတ်ကူးများကိုယူခြင်းနှင့်သင်၏အတွေးအခေါ်များကို“ လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်” အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ကိုယ်ပိုင်သော့ကွင်းဆက်အတွက်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်ဟုယုံကြည်ပါ။
ဒီဇိုင်း 3D die casting personalized keychain , one side လိုဂို
လုပ်ငန်းစဉ် ပျော့ပျောင်းသောကြွေစိတ်ကြိုက် Keychain ကိုသွန်း 3D သေဆုံး
အရွယ်အစား 30mm ။
နမူနာကြေး Free sample kit. နမူနာကြေး collect base of your design and requested specifications.
နမူနာအချိန် ထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက်အနုပညာလက်ရာအတည်ပြုပြီး ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အကြား
personalized keychain with 3D butterfly in antique nickel ပန်း
ဦး ခေါင်းခွံအရိုးစက္ကူ box ထဲမှာစိတ်ကြိုက် keychain
ကွဲပြားခြားနားသောအကြမ်းဖျင်း 2D သို့မဟုတ် 3D ဒီဇိုင်းနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက် keychain, စျေးပေါနိမ့်နှင့်အစာရှောင်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်
Different ထုပ်ပိုးs meet different requirements
SAFE/We choose environmentally ပန်း
၁။ မေး။ ။ စိတ်ကြိုက် keychain အပြင်အခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုလည်းထုတ်လုပ်နိူင်မည်နည်း။
3. Q: ကျွန်ုပ်သည်အရည်အသွေးနိမ့်သောဘတ်ဂျက်တွင်ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးရှိသည့်သော့ချိတ်ကိုလိုချင်ပါကမည်သို့ဆောင်ရွက်မည်နည်း။
Kotar: ပစ္စည်း Iron with soft enamel processes isagood choice. . သွပ်သတ္တုစပ် soft enamel is recommended of big sizes more than 50mm or thick thickness ex. 3mm up.
Hot Tags: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူ၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်စျေးပေါ၊ အနိမ့်စျေး၊ စျေး၊ စျေးနှုန်းစာရင်း၊ ဈေးနှုန်း၊ ဖက်ရှင်၊ အရည်အသွေး၊